B2B Profiling sy Prospecting miaraka amin'i Mintigo | Martech Zone
Taorian'ny nandaozako ny indostrian'ny gazety, ny iray amin'ireo asako voalohany dia ny fananganana tahiry ho an'ny mpivarotra B2B. Nampiasainay ny fitaovana ampiasain'ny antoko fahatelo, nanamboarana fomba hanamboarana index manokana izahay amin'ny toetran'ny firmagraphic eo amin'ny tobin'ny mpanjifanao. Raha atao teny hafa, dia hampahafantatra ireo mpanjifanao tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fidiram-bola, isan'ny mpiasa, kaody indostrialy, serivisy an-taonany, toerana sy toerana hafa mety ho hitantsika
Raha vantany vao fantatray hoe toy ny ahoana ny mpanjifa iraisana, dia hampiasa ireo mombamomba ireo izahay mba hamoahana angon-drakitra momba ny prospect. Tsy mila tonga amin'ny lalao iray ianao, ny hany ilainao dia ny mametraka ny lisitry ny lisitry ny lisitry… izay iza no akaiky indrindra toa ny mpanjifanao sy izay toa tsy dia nitovy tamin'ny mpanjifanao. Somary sarotra kokoa io noho ny index sy ny isa nahatafiditra indeks multivariate… fa ireo no fototra.
Hita ireo olona avy amin'ny Mintigo naka an'io fomba fiasa io, nampihatra azy tamin'ny tranonkala, ary nametraka azy tamin'ny steroid!
The Mintigo tranonkala dia mitanisa antony 5 hampiasana ny serivisin'izy ireo:
Raiso ny mpihaino mety - Ny fampahalalana feno sy marina momba ny olona sy ny orinasa dia mamela anao hihoatra ny mpiandry vavahady ary hifandray mivantana amin'ireo mpanapa-kevitra, hanatsara ny fantsom-pifandraisana, ny tahan'ny famaranana ary ny fivarotana.
Mampiroborobo ny fahombiazan'ny pipeline - Mintigo bebe kokoa no mivadika ho varotra noho ny avy amin'ny loharano hafa, hatramin'ny 70% ny varotra isan'andro, araka ny fanadihadian'ny mpanjifa Mintigo.
Mikoriana mora azo, azo vinavinaina - Maharitra dimy minitra ianao hamenoana ny fahaiza-mitarika isam-bolana - avelao i Mintigo hanao ny fampiakarana mavesatra ho anao amin'ny fantsom-bokatra voamarina Mintigo. Ny mpiasan'ny varotrao dia afaka manamboatra fitarihana haingana kokoa miaraka amin'ny fahatokisana fa ho feno hatrany ny fantson-dry zareo.
Ataovy fohy ny tsingerin'ny varotra - Mintigo manangona fomba fijery misimisy kokoa momba ny fifandraisana rehetra satria ny firaka tsirairay dia mifanaraka amin'ny mombamomba ny mpividy mpiorina ambony indrindra. Ny torolàlana voamarina amin'ny Mintigo dia manome ny ekipa mpivarotra ny fampahalalana ilainy amin'ny famolavolana kaonty mahomby ary mamela ny mpivarotra aotra amin'ny tanjona kendrena amin'ny fampielezan-kevitra miavaka.
Miteraha fidiram-bola vaovao - Mintigo manala sarona ny mety ho tsena miafina amin'ny alàlan'ny fanovana scanner mihoatra ny 10 tapitrisa ireo orinasan-tserasera, mahita ireo mifanentana miorina amin'ny toetra lalina, fa tsy fampahalalana tsotra fotsiny momba ny haintany. Hitan'ny mpanjifa fa hatramin'ny 90% n'ny fitarihana Mintigo dia vaovao amin'izy ireo - na dia eny amin'ny tsena aza dia efa nandinika tsara tamin'ny fampiasana lisitra izy ireo.
Misaotra manokana ny namana sy ny mpanjifa Isaac Pellerin, Mpitantana ny Revenue Marketing ao amin'ny TinderBox, tamin'ny nanondroany ahy ity serivisy ity. Tinderbox dia rindrambaiko fanolorana varotra izay mahatonga azy ho tsotra ho anao ny mamorona, manova ary manara-maso tolo-kevitra momba ny varotra. Mampiasa azy io izahay ary tianay!
Tags: b2bb2b mitarika taranakab2b manantenaisa sc2 bXNUMXbmintigo